Wingate SAI: တစ်သက်တာအတွက် ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်
အလယ်တန်းကျောင်းတက်နေတဲ့ "ရှယ်လီ"ဟာ မကြာသေးခင်က လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ ခရစ္စမတ်ကတ်တွေကိုအထပ်လိုက်ကိုင်ပြီး သူငယ်ချင်း"ဟီလာရီ"ကိုကြွားဖို့ ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဟီလာရီယူလာတဲ့ ခရစ္စမတ်ကတ်က သူ့ထက်ပိုများနေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
"နင့်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ များလာချည်လား? နည်းတစ်နည်းတော့ ရှိရမယ်?" ရှယ်လီက အားကျကျမေးတယ်။
"နည်းကတော့... တခြားသူအပေါ် ရိုးသားမယ်၊ နွေးထွေးမယ်"လို့ပြောပြီး ဟီလာရီဟာ ရှယ်လီကို လွန်ခဲ့တဲ့(၂)နှစ်က သူတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ပြောပြခဲ့တယ်။
"အဲဒီအချိန်က နွေဦးရာသီပေါ့။ နွေးနွေးထွေးထွေး ညနေခင်းတစ်ခုမှာ ဖေဖေနဲ့ကျွန်မ ပန်းခြံထဲလမ်းလျှောက်နေခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ အဘွားအိုတစ်ဦးကို ကျွန်မတွေ့လိုက်တယ်။ ဒီလောက်ပူနွေးတဲ့ ရာသီဥတုမှာ သူကသိုးမွေးအင်္ကျီအထူကြီးကို ဝတ်ထားတယ်။ လည်ပင်းမှာလည်း သားရေပုဝါ ပတ်ထားတယ်။ သူ့ပုံစံက နှင်းတွေအရမ်းကျနေလို့ ဝတ်ထားသလိုမျိုးပဲ။ ဖေဖေရဲ့လက်မောင်းကို ကျွန်မအသာအယာဆွဲပြီး "ဖေဖေ... အဲဒီအဘွားအိုရဲ့ပုံစံက ရယ်စရာ အရမ်းကောင်းတာပဲနော်"လို့ ပြောလိုက်တယ်"
"ကျွန်မရဲ့စကားကြောင့် ဖေဖေရဲ့ပုံစံ အရမ်းတည်ကြည်သွားတယ်။ ခဏလောက်တိတ်ဆိတ်သွားပြီးမှ ဖေဖေ စကားစတယ်။
"ဟီလာရီ... သမီးကြည့်ရတာ အရည်အချင်းတစ်ခု လျော့နေသလိုပဲ။ တခြားလူကို သမီး မနှစ်သက်၊ မလိုလားတတ်ဘူး။ ဒါဟာ တခြားလူနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါ သမီးမှာ ရိုးသားမှုနဲ့ ဖော်ရွေမှုမရှိကြောင်း သက်သေပြနေတာပဲ"
"အဲဒီတုန်းက ဖေဖေဟာ ပြဿနာကို အကြီးချဲ့နေတယ်လို့ ကျွန်မထင်ခဲ့တယ်။ ဖေဖေ့ကို မကျေမနပ်နဲ့"အဲဒီအဘွားအိုရဲ့ပုံစံကို ရယ်စရာကြီးလို့ ဖေဖေမထင်ခဲ့ဘူးပေါ့?" လို့ ကျွန်မပြန်မေးတယ်"
"သမီးနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်ပဲ.. အဲဒီအဘွားအိုပုံစံကို ဖေဖေနှစ်သက်တယ်" လို့ ဖေဖေပြန်ပြောတော့ ကျွန်မအရမ်း အံ့သြသွားမိတယ်"
"အဲဒီအဘွားအိုဟာ ဖျားနေလို့၊ နေထိုင်မကောင်းသေးလို့ အနွေးထည်၊ မာဖလာတွေ ဝတ်ထားတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သစ်ကိုင်းပေါ်က ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်ကို သူကြည့်လိုက်တဲ့ပုံစံက အရမ်းကို အသက်ဝင်နေတယ်။ ကဲ.. သူ့ပုံစံ ချစ်စရာကောင်းမနေဘူးလား? နွေဦးရာသီကို သူငမ်းလင့်နေတယ်။ သဘာဝကို သူနှစ်သက်၊ သဘောကျတယ်။ ဒီအဘွားအိုဟာ လူကိုဆွဲဆောင်စေတယ်လို့ ဖေဖေထင်တယ်" လို့ ဖေဖေက ဆက်ပြောတယ်။
"အဲဒီအချိန်ကျမှ အဘွားအိုကို နောက်တစ်ခေါက် ကျွန်မသေချာပြန်ကြည့်မိတယ်။ အဘွားအိုဟာ ဖေဖေပြောသလိုပဲ နွေဦးကိုတောင့်တတဲ့ အရိပ်အယောင်တွေ သူ့မျက်လုံးထဲ ထင်ဟပ်နေတယ်။ မျက်နှာပေါ်ပေါ်နေတဲ့ သူ့အပြုံးတွေက သူ့နှလုံးသားရဲ့အပျော်ကို မဖုံးဖိထားနိုင်ခဲ့ဘူး။
"ဖေဖေဟာ အဘွားအိုရှေ့ ကျွန်မကိုခေါ်သွားပြီး အပြုံးလေးနဲ့ "နွေဦးကို အရသာခံနေတဲ့ အန်တီ့ရဲ့ပုံစံက လူကိုဆွဲဆောင်စေတယ်။ အန်တီကြောင့် နွေဦးရာသီက ပိုလှသွားပါတယ်" လို့ပြောတယ်။ အဘွားအိုဟာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ "ကျေးဇူး..... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" ပြောပြောဆိုဆို သူ့လက်ဆွဲအိတ်ထဲကနေ ဘီစကတ်တစ်ထုပ်ထုတ်ပြီး ကျွန်မကို လှမ်းပေးတယ်။ "သမီးလေးက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ" တဲ့။
အဲဒီအဖြစ်အပျက်နောက်ပိုင်း ဖေဖေက ကျွန်မကို "သူတစ်ပါးကိုရိုးရိုးသားသား၊ ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ လိုလားတတ်ရတယ်။ လူတိုင်းမှာ ဖေဖေတို့လိုလားနှစ်သက်စေတဲ့အရာတွေ ရှိတယ်။ ဒါမှ သမီးမှာ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးရှိလာနိုင်တယ်" လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
အချိန်ကမြားအလျင်လို မြန်ဆန်ခဲ့တယ်။ မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်းမှာ ခရစ္စမတ်ရက်ကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီနေ့က အိမ်မှာ ခရစ္စမတ်သစ်ပင်၊ လက်ဆောင်တွေ ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ ဟီလာရီတစ်ယောက် အလုပ်များနေခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ရှယ်လီတစ်ယောက် မျက်နှာပေါ်မှာ အပြုံးတွေနဲ့ အိမ်ထဲပြေးဝင်လာပြီး ဟီလာရီကို အားပါးတရပွေ့ဖက်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ "ဟီလာ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ခရစ္စမတ်မှာ ငါ ခရစ္စမတ်ကတ်တွေ (၈၂)ခုတောင် ရလိုက်တယ်။ မနှစ်ကထက် ၁ဝဆတောင် ပိုခဲ့ပါတယ်" လို့ပြောတယ်။
"ငါပေးမယ့် ကတ်လေးလဲ ထည့်တွက်လိုက်ပါဦး"
ဟီလာရီက ပြောပြောဆိုဆို အလှဆုံးကတ်တစ်ခုကို ကမ်းပေးလိုက်တယ်။ ကတ်ပေါ်မှာက "လိုလားနှစ်သက်တယ်ဆိုတာ ခင်မင်ရင်းနှီးဖို့ ပေါင်းကူးတံတားလေးပါ။ သူတစ်ပါးကို ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ လိုလားတတ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်" လို့ ရေးထားတယ်။
Posted by World of Wingate Sai at 9:01 PM